Momba anay - SYNMEC International Trading Ltd.
Ny voa aorian'ny fijinjana dia ahitana loto maro isan-karazany, toy ny vovoka, mololo, vato, vato, vato, sns. Mety ho bobongolo, simba, aretina ary simba ny voa, izay mety tsy hitsimoka aorian'ny famafazana. Misy fotaka ny tsaramaso ka mampihena ny vidiny eny an-tsena. Manana ny teknôlôjia sy milina hanamboarana voa matanjaka, voam-bary salama ary tsaramaso tsara isika.
Mba hanamboarana ny milina hanadiovana ny varimbazaha aorian'ny fijinjana dia avelao izy ireo handeha malalaka eny an-tsena, ny fanadiovana mialoha dia esory ny voa very hery, hampitombo ny taham-pitsimokany, ny famolahana ny tsaramaso dia mampamirapiratra ny vidiny eny an-tsena. Isika no mpanolo-tsaina ambony indrindra eran-tany amin'ny fanadiovana ny voa sy ny vahaolana fanodinana voa. Manana vondrona injeniera matanjaka manana fahalalana tsara izahay, mandeha an-tsambo imbetsaka ny injeniera rehetra, fantaro ny varinao, fantaro ny lotonao, ary koa amin'ny vokatra midadasika kokoa, mba ahafahantsika manome vahaolana bebe kokoa amin'ny teti-bolanao
Nanomboka ny orinasa ary niorina ny orinasa.
Ruixue Grain Selecting Machinery Co., Ltd. dia manomboka manamboatra milina fanadiovana sy fanodinana masomboly.
Manomboka varotra iraisam-pirenena
Vanim-potoana fitomboana haingana ho an'ny tsena any ivelany.
Nanangana SYNMEC International Trading Ltd. izahay mba hanomezana serivisy varotra iraisam-pirenena tsara kokoa
Serivisy SYNMEC firenena 76, ampio izy ireo hahazo voa matanjaka, voam-bary salama ary tsaramaso tsara, toy izany koa ny fanavaozana ny orinasa varotra iraisam-pirenena B any Shina.
Orinasa vaovao nisokatra tamin’ny velaran-tany 11 ha.
Naondrana tany amin'ny firenena 100 mahery ary nanavao ho Level A.
Firenena 160 mahery.